China Egwuregwu Kasị Mma China Manufacturers & Suppliers & Factory
Egwuregwu Kasị Mma - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Egwuregwu Kasị Mma)
Egwuregwu egwu kachasị mma 800W 10400LM
Nke a 800W Best Led Stadium Lights nwere ọnụ nke 104,000lumens. Egwuregwu egwu nke Musco dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Nke a na-enye nnukwu ọkụ na-acha ọkụ ọkụ bụ IP65 ma chebe ka e ghara imikpu mmiri. Ihe a na-ejikọta ọnụ nke ụda...
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu N'Ịntanet
Nke a dị elu mmepụta 300W Nwa oge Stadium ọkụ nwere ọnụ nke 39,000lumens. Ụlọ Egwuregwu Egwuregwu nke ime ụlọ dị mma maka ịmepụta nnukwu ámá egwuregwu, ogige ntụrụndụ na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ebe bọl, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ buru ibu. Nke a na-emepụta Egwuregwu ọkụ ọkụ nwere ntinye nchebe...
Atụmatụ ọkụ ọkụ kachasị mma 500W 65000LM
Ihe ngosi a dị elu 500W Stadum Lighting Design nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Egwuregwu Egwuregwu eji eji ere dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Nnukwu ọkụ a kachasị mma bụ IP65 ma chebe ka e ghara imikpu mmiri. Ihe a na-eme na nke a...
Egwuregwu Egwuregwu Football Led Lighting Fixtures 1200W 1560000LM
Nke a 1200W Stadium Lighting Fixtures nwere 1560,000lumens. The Yankee Stadium Lighting dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Egwuregwu nnukwu egwuregwu a bụ ọkụ ọkụ bụ IP65 ma chebe ka e ghara imikpu mmiri. Ihe a na -emechi nke a na...
Egwuregwu Iju Mmiri nke ụgbọ mmiri maka Sale 600W 78000LM
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu 600W a nwere ọnụ ọgụgụ 78,000lumens. Egwuregwu Iju Mmiri Stadium dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Nke a buru ibu eji eji egwu egwu bụ IP65 ma chebe ka e ghara imikpu mmiri. Ihe a na-emechi nke a na-eme...
Egwuregwu Baseball na-apụtaghị ìhè 800W 104000LM
Nke a 800W Stadum Lighting Cost na-atụle 104,000lumens. Egwuregwu n'èzí n'èzí 800w dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Nke a nnukwu ụlọ egwuregwu Baseball ọkụ bụ IP65 ma chebe ka e ghara imikpu mmiri. Ihe a na-ejikọta nke ọma...
Egwuregwu egwu ọkụ 400W 52000LM
Igwe egwuregwu a dị na 4 00w nwere ọnụ ọgụgụ 52,000lumens. Egwuregwu Ịgba Ọkụ Australia dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Igwe ọkụ Philips Led a dị ukwuu bụ IP65 ma chebe ka e ghara imikpu mmiri. Mmiri ọkụ ọkụ mmiri ahụ bụ 100-277VAC...
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Baseball Football Led 600W
Egwuregwu Mmiri Mmiri a nke 600W nke a na-agba agba nwere 78,000lumens. Led Football Stadiums Lights dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Nke a buru ibu nke Led Baseball Stadiums bụ IP65 ma chebe ka e ghara imikpu mmiri. Ihe a na-ejikọta...
Egwuregwu Egwuregwu Led na-acha ọkụ ọkụ 500W 65000LM
Nke a dị elu 500W Led Stadium Light Bulbs nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. The Hyperikon Pro Led Stadium Light dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Nke a nnukwu Led Football Stadium Light bụ IP65 ma chebe ka e ghara imikpu mmiri. Ihe a na-...
Iju Mmiri Iju Mmiri N'èzí 600W Egwuregwu Stadiums 78000LM
Iju Mmiri Iju Mmiri N'èzí 600W Egwuregwu Stadiums 78000LM Bbier na-ewepụta ogwe ọkụ dị n'èzí n'èzí n'èzí n'èzí n'èzí, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị mkpa nke ọma na ọkụ ọkụ. Ngwá ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ a na-emepụta ihe ọkụkụ na-enye ezigbo ìhè ọkụ na oge efu. IP66 n'èzí 600W kpatara ìhè idei mmiri - A...
Egwuregwu kpochapu ọkụ ọkụ gas na-ekpuchi ọkụ 150W
Ihe ntinye ego anyị nwere ike ịbanye bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Igwe ọkụ ndị a na-acha ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ngwá ngwongwo dị n'elu ụlọ nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Nnukwu Mgbapụta anyị 150w bụ...
60W Egwuregwu Ngwá Agha nke Ọma 7200LM 5000K
Ụlọ ọrụ gas anyị 60W bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Ụlọ Osimiri Gas a dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Egwuregwu Gas na-acha ọkụ ọkụ nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ebe anyị na- acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-enwu bụ slim design slim na-achọ, dị...
Egwuregwu Egwuregwu Ugwu Ukwu Bay nke dị na High Bay 150W
Ụlọ elu nke ụlọ ahịa dị na High Bay na-enwu 150W bụ 130lm / w na 19500 lumens. Nnukwu Akwụsị Nnukwu Mmiri anyị 150W nwere ike dochie 400W HPS MH HID. Ebube echichi maka nke a bụ High Bay Retrofit Led bụ 5-7m. Nke a dị elu n'ọnụ mmiri na-egbuke egbuke ọkụ bụ EC ROHS ETL DLC. Ejiri nnukwu ọdọ mmiri 80w na- eji ụlọ...
edu egwuregwu egwuregwu ìhè 450W egwuregwu egwuregwu
edu egwuregwu egwuregwu ìhè 450W egwuregwu egwuregwu 450W LED Stadium Sports Arena Lines na-emepụta ruo 58500lm nnukwu enwu (1200W Ebube Kwesịrị Ekwesịrị) ma zọpụta 88% na ọkụ eletrik nke ọkụ. Egwuregwu Mkpụrụ Egwuregwu Baseball anyị bụ onyinyo n'enweghị onyinyo ma na-egbukepụ ọkụ, na-enye ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ nke...
450W 5000K egwuregwu na-eburu ọkụ ọkụ
450W 5000K egwuregwu na-eburu ọkụ ọkụ 450W LED Stadium Sports Arena Lines na-emepụta ruo 58500lm nnukwu enwu (1200W Ebube Kwesịrị Ekwesịrị) ma zọpụta 88% na ọkụ eletrik nke ọkụ. Egwuregwu Mkpụrụ Egwuregwu Baseball anyị bụ onyinyo n'enweghị onyinyo ma na-egbukepụ ọkụ, na-enye ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma ma...
450N na - eduzi ihe eji eme egwuregwu maka ntụrụndụ
450N na - eduzi ihe eji eme egwuregwu maka ntụrụndụ Na SMD 3030 LED, nke a 400W Baseball Field Lights na -eme ka elu 52000lm dị elu (1200W Ebube Kwesịrị Ekwesị) ma zọpụta 88% na ọkụ eletrik nke ọkụ. Egwuregwu Mkpụrụ Egwuregwu Baseball anyị bụ onyinyo n'enweghị onyinyo ma na-egbukepụ ọkụ, na-enye ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ...
E27 Led Corn Bulb Dimmable 60W 7800LM
Ihe E27 Led Corn Bulb Dimmable bụ oke na-egbuke egbuke na 120lm / w akwa watt to lumen output ratio. Nke a bụ 60W ọka Bulb maka ụlọ ala na-etinye 200B na bọlbụ ma ọ bụ na-echekwa ọtụtụ ụgwọ eletrik otu afọ. Nyocha ọka ọka ọka enweghị radieshon, dịghị filika, ntabi-na re-na, edo ọkụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na...
50W Led Corn Bulb Dimmable 6500LM
Ụlọ ọka anyị bụ Bulb Home Depot bụ oke na-egbuke egbuke na 120lm / w akwa watt to lumen output ratio. Nke a Hyperikon Corn Bulb 50W na-anọchi anya bọmbụ 150W ka ọ na-echekwa ọtụtụ ụgwọ eletrik otu afọ. Okpokoro Ngwá Agha 50w Led Cornb Dimmable enweghị radieshon, ọ dịghị flicker, Na-agbanye ọsọ na nlọghachi, ọkụ ọkụ...
Egwuregwu Kasị Mma Egwuregwu Gas Egwuregwu Gym Egwuregwu Ọgba Mmiri Led Egwuregwu nke Gym Egwuregwu egwu kacha mma Egwuregwu Ntugharị Troffer Egwuregwu Ọrụ 120W